Ibsa Abbaan Alangaa waliigalaa FDRI laate – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Sadaasa 3, 2012(FBC) – Abbaan Alangaa walii gala FDRI yakka ajjeechaa hooggantoota mootummaa naannoo Amaaraa fi Hooggantoota olaanoo Raayyaa Ittisa biyyaa irratti waxabajjii 15,2011 raawwate ilaalchisee ibsa laate.
Yakkichi qindeesuummaa Asaaminoo Tsigeen akka ta’e mirkanessera.
Humni addaa naannoo amaaraa gocha kana irratti hirmaatan 39 hanga ammaatti too’annoo jala hin oolle.
Gochaan ture gochaa dursa yeroo dheeraaf qophiin irratti taasiifame akka ture ibsameera.
Qophii taasiifamaa ture keessatti ijaarsaaleen garaa garaa ijaarramuun magaalaa Finfinnee fi Asoosaatti leenjiin laatamaa turuu ibsichi kaaseera.
Qaamooleen leenjii kanaaf filatamanis hedduun isaanii qaamoolee kanaan dura sababa namuusaan mana hojii mootummaa keessaa ari’aman akka ture eerrameera.
Ajjeechaan Hooggantoota Raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatees hooggantoota kanneen irratti tarkaanfii fudhachuun haala salphaa ta’een kaayyoo qabatan galmaan gahachuuf kan kaayyeefate ture jedhame.
Karoorrichi Jeneraal Saa’aree Makkoonni qofa osoo hin taane Jeneraal Birhaanuu Juulaas kan dabalate ture jedhame.
Gocha kana raawwachuuf kutaalee garaa garaa keessaa qaamni odeeffannoo qindeessuus haalaan ijaarramuus ibsameera.
Dhimma kana raawwachuuf maddi baajataa mana mootummaa fi abbootii qabeenyaa dhuunfaa akka ture eerrameera.
Yakki kun qaamoolee caasaa mootummaa keessa turaniin kan qindaa’ee akka ture abbaan alangaa walii gala ibsaniiru.
Shakkamtoota gocha kana raawwachuun shakkamanii too’annoo jala oolan irratti murtoon kennamuuf hojjetamaa kan akka ta’e ibsichi eereera.
Shakkamtoota magaalaa Bahaar Daari 277 too’annoo jalan keessaa 55 himannaan kan irratti banamu yoo ta’u,15 ammoo qorannoo irra jira jedha ibsichi
Finfinneetti shakkamtoota 140 to’atamaan keessaa shan himannaa irratti banuuf qophiin kan xumuramee ta’uu fi shakkamtoonni 61 ammoo mirgi wabii eeggamuun isaanii ibsuun shakkamtoonni 13 ta’an ammo ragaan isaanii qoratamaa jira.
Gocha kanaan walqabate qawween kilaashikoovin 114 fi bireeniin 3 dhukaasa guyyaa san dhukaafamaniin to’annoo jala olaniiru.
Dhimma kanaan walqabatee sanadoonni garagaraa, bilbiloota sochootu (moobayila) hedduun, maallaqa biyya alaa fi keessa, konkolaattoota 5 dabalatee to’annoo jala ooleeniiru.
Yerichatti hojiirra kan turan eegdoota 4 dabalatee jaaldhaabbiin 8 to’annoo jala oolaniiru.
Ajjeechaa hoggantoota Raayyaa Ittisa Biyyaa Itaamaajor Shuum Jeneraal Sa’aree Makooniin fi Mejer Jeneraal Gaza’ii Abarraa irratti raawwate eegdoota isaaniin ta’u ibsameera.
Gochichi mootummaa humnaan to’chuun fonqoolcha mootummaa ture jedhaniiru.
Lubbuun namoota 15 yoo darbu namoonni 20 miidhamaniiru.
Shakkamtoonni 22 lakkoofsi herrega baankii isaanii ugguramuu ibseera.
waliigalaan guyyaa sanatti shakkamtoonni gocha kana irratti hirmaachuun too’annoo jala oolaan keessa namoota 68 irratti himanaan banamuuf akka ta’e ibsameera.
Yakkichi qaama mootummaan qaama mootumma irratti waan raawwatameef qorannoof walxaxaa taasiisee ture jedhan.
Sirni hundeessuu yaa’ii mariisistuu hariiroo alaa gaggeeffame
Ityoophiyaanonni 840 Saawdii Arabiyaatii deebi’an
ABO dabalatee paartileen morkattootaa waliin hojjechuuf waliigalan
Obbo Tawaldeen badhaasa hojii raawwachiisa olaanaa buufatoota xiyaaraa waggaa…
Waliigalteen ijaarsa daandii asfaaltii kiilo meetira 299…
Obbo Lammaan, Tiiboor Naaj waliin mari’atan
Buufanni too’annoo Gumurukaa dhaamaatiif nu saaxile –…